Umaanaan Madax-bannaanayn Diintayada, Umadduna Masoo Kaban Karto Marka Diinta Iyo Dhaqanku Ka Baaba'o - Madaxweynaha DDS Oo Hadal Qiiro Leh Jeediyey - Jigjiga Online
HomeSomalidaUmaanaan Madax-bannaanayn Diintayada, Umadduna Masoo Kaban Karto Marka Diinta Iyo Dhaqanku Ka Baaba’o – Madaxweynaha DDS Oo Hadal Qiiro Leh Jeediyey
Jigjiga (Jigjigaonline) – Madaxweynaha Dawladda Deegaanka ayaa ka hadlay dhibaatooyinkii lagu hayey shacabka deegaanka 28-kii sannadood ee ugu dambeeyey, kuwaas oo uu tilmaamay inay iskugu jireen dil, dhac iyo mid diimeed oo caqiiqadooda iyo dhaqankooda lagu baabi’inayey.
Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar oo bulshada magaalada Jigjiga kula tukaday garoonka kubadda cagta ayaa waxa qudbad uu jeediyey uu kaga hadlay isbeddellada ka dhacay dalka intii uu xukunka hayey, waxyaabihii hore u jiray ee laga soo kabtay iyo waajibaadka saaran dadka ee ay tahay inay kasoo baxaan.
Madaxweyne Cagar, waxa uu tilmaaamay in dadka deegaanku aanay u madax-bannaanayn diintooda Islaamka ee lagu hayey farogelin ballaadhan, isla markaana lagala dagaallamayey dhaqanka iyo diinta suubban, waxaanu hoosta ka xariiqay in labadan arrimood yihiin kuwa baab’iya ummadaha ee aanay kasoo kabanin.
“Shacabka Deegaanka Soomaalida waxa soo maray marxalado adag oo ay ka mid tahay in aanay u madax bannaanayn diintooda oo farogelin ballaadhan lagu hayey oo siyaabo aanay jeclayn in loo maamulo laga shaqayn jiray. Waxa ugu muhiimsan ee maanta inaynu ka hadalno u baahan waa arrinta madax-bannaanida diinta iyo kaalinta uu shacabku ku leeyahay inuu ilaashado dhaqankiisa suubban iyo diintiisa, taas oo ah waajib dhamaanteen u yaalla ee aan ahayn mid ku kooban masuuliyiinta oo kaliya.” Ayuu yidhi madaxweyne Mustafe.
Isaga oo hadalkiisa sii wata, waxa uu madaxweynuhu dul-istaagay sida burburinta diinta iyo dhaqanku ay u abuureen dhibaatooyin ay ka mid yihiin dil iyo kufsi, kuwaas oo wax caadi ah noqon lahaa haddii ay maanta soo gaadhi lahaayeen, waxaanu yidhi: “Bulshadu kama soo kaban karto diin iyo akhlaaq. Wax kasta oo kale oo burbura waa laga soo kaban karaa oo ay ka mid yihiin hanti burburta, guryo burbura, dhaqaale burbura, dad dhanta, laakiin bulshadu waxay baaba’aysaa marka dhaqanka iyo diintu ay ka baaba’aan. Labadaa shay waxa tusaale cad u ah waxyaabihii ka dhacayey deegaankeena tobankii sannadood ee ugu dambeeyey amaba 28-kii sannadood ee ugu dambeeyey waa la odhan karaa haba kala darraadaane. In dadka la laayo, in dadka la boobo, in dumarka laga xishoon waayo, in dumarka la kufsado. Sheekooyinkaa qaarkood wax caadi ah ayay waqtigan ka noqon lahaayeen. Waxyaabahaas oo dhan waxa keenay inay burbureen qiyamkii umaddu.”
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay ballan-qaadayso inay bixin doonto wax kasta oo loo baahan yahay oo diinta iyo shaqanka lagu horumarinayo, waxaana uu dhallinyarada u sheegay inay la yimaaddaan ixtiraam oo ay waalidiintood ixtiraamaan.
“Sidaa daraadeed waxaan shacabka kula dardaarmayaa ilaashada dhaqanka iyo diintooda, waxay xukuumaddu ballanqaadaysaa in taageero kasta oo loo baahan yahay inay bixin doonto.” ayuu yidhi.
Dhinaca kale waxa uu sheegay inay jiri doonto siyaasad laysku haysto oo kursiga la kala riixan doono, balse waxa uu xusay inay tahay in laga fogaado qabyaalladda, waxaana uu si dadban ugu jawaabay dad adeegsanaya shaadh qabyaaladeed oo ku dooda inuu jiro musuqmaasuq.
Halkan ka daawo qudbadda madaxweynaha oo dhamaystiran: